ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်
Posted by မောင် ပေ on May 19, 2012 in Creative Writing, Hobbies & Games | 12 comments
သည်ကနေ့ စနေည/တနင်္ဂနွေနံနက် ၁နာရီ၁၅ မိနစ်အချိန်မှာ ကန်မယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲအကြောင်း နဲ့ မနက်ဖန် တနင်္ဂနွေည/တနင်္လာနံနက် ၁နာရီ၁၅မိနစ်အချိန်မှာ ကန်မယ့် အီတလီ ကိုပါအီတာလီယာဖလား ဗိုလ်လုပွဲအကြောင်းပါ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို ဂျာမနီနိုင်ငံ မြူးနစ်မြို့က ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ရဲ့ အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ “Allianz-Arena” မှာ ကန်မှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ကိုပါအီတာလီယာဖလား ဗိုလ်လုပွဲကိုတော့ အီတလီနိုင်ငံ ရိုးမား မြို့ က ရိုးမားအသင်းရဲ့ “Stadio Olimpico” ကွင်းမှာ ကန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် – ချဲဆီး ”
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
ရှုံး ၊ နိုင် ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
ဒေါ့မန် ၅-၂ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ( ပိုကယ်ဖလားဖိုင်နယ် )
ကိုလုံး ၁-၄ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ၂-၀ စတုဂတ်
ရီးရဲမက်ဒရစ် ၂-၁ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ဝါဒါဘရီမင် ၁-၂ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
ချဲဆီး နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင်
ချဲဆီး ၂-၁ ဘလက်ဘန်း
လီဗာပူး ၄-၁ ချဲဆီး
လီဗာပူး ၁-၂ ချဲဆီး ( အက်ဖ်အေဖလား ဖိုင်နယ် )
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Lahm, Tymoshchuk, Boateng, Contento
လယ် Schweinsteiger, Kroos
လယ် Robben, Muller, Ribery
နောက် Bosingwa, Cahill, David Luiz, Cole
လယ် Mikel, Essien
လယ် Kalou, Lampard, Mata
ဘိုင်ယန် မှာ Badstuber, David Alaba နဲ့Luiz Gustavo တို့ ဟာ ပွဲပယ် ခံထားရပါတယ် ။
ချဲဆီးမှာ John Terry ၊ Branislav Ivanovic ၊ Ramires နဲ့Raul Meireles တို့ ပွဲပယ်ခံရပါတယ် ။
သည်ပွဲရဲ့ ဈေးအနေအထားကို လေ့လာကြည့်မိသလောက် ဆိုရင် ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာကနေ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ အထိ အာရှဘက်မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တစ်ဂိုးအနိုင် ၅၀ အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ ကြာသပတေးနေ့ မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် သရေ အရှုံး ကို ပြောင်းခဲ့ပါတယ် ။ စနေနေ့ မနက်မှာ ပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် တစ်ဂိုးအနိုင် ၅၀ ပြန်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား နဲ့ လက်တစ်ကမ်းဘဲ လိုတော့တဲ့အနေအထားမှာ နှစ်သင်းလုံး အားကုန်ထုတ် ကြိုးစားကစားကြမှာဖြစ်လို့ ပွဲကောင်းတစ်ပွဲ ကြည့်ရမယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ။ ချဲဆီးအသင်းဟာ ဘာစီလိုနာ အိမ်ကွင်းမှာ ကစားသလိုမျိုး လုံးဝ ခံစားကစားလာမယ် ဆိုရင်တော့ ပွဲဟာအေးနေပါလိမ့်မယ်။
ချဲဆီး ဟာ ဘာစီလိုနာလို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အသင်းမျိုး ကို ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာ ၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ နှစ်ကျော့လုံးတွေ့ ဆုံခဲ့ရာမှာ ခံစားဦးစားပေးကစားခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ကစားပေါက်ကလဲ passing ဘဲ အထူးအားပြုကစားခဲ့တာကြောင့် ၊ နောက်တန်း၂ထပ်ပုံနဲ့ ကစားကွက်ခင်းခဲ့တဲ့ ချဲဆီး အသင်း ကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာပါ ။
အခု အဓိက ကစားသမားအစုံအလင် နဲ့ ပွဲထွက်လာမယ့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကို ချဲဆီးဟာ ပွဲချိန်ပြည့် ခံစားဦးစားပေးကစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာစီလိုနာနဲ့ တွေ့ ခဲ့သလို အခြေအနေကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ရဲ့ တောင်ပံတွေ ဖြစ်တဲ့ ရစ်ဘာရီ နဲ့ ရော်ဘင် တို့ ဟာ ဖြတ်တင်ဘောတွေ ကို သေသပ်တိကျစွာ ပေးနိုင်စွမ်းရှိသလို ၊ ကိုယ်တိုင်လဲ ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ ကစားသမားတွေပါ ။ ရှေ့ တန်းက ဂိုမက်ဇ် ကလည်း ခေါင်းတိုက်ဂိုးရော ကန်သွင်းဂိုးရော စွယ်စုံရတဲ့ ကစားသမားကောင်းတစ်ဦးပါ ။ အခုပွဲမှာ ဘိုင်ယန်ဟာ ချဲဆီး ကို ဖြတ်တင်ဘောရော ၊ လူပေးဘော ရော နဲ့ ပါ ပေါင်းစုံ တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားလာမှာ ကို မြင်ရမှာပါ ။
ခံစစ် ကို ဦးစားပေးပြီးမှ ၊ ပီတာဆက် နဲ့ ဒရော့ဘာပေါင်းပြီး ကောင်တာဖောက်ကစားမယ့် ချဲဆီး အခြေအနေ မလှနိုင်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် ရာမီးရက်ဇ် လို စကေးကောင်းတဲ့ ကစားသမားမျိုး ပွဲပယ်ခံထားရတာဟာ အလွန်နစ်နာပါတယ် ။
ဈေးအနေအထားအရ ဘိုင်ယန် တစ်ဂိုးအနိုင် ၄၅ / ၅၀ / ၅၅ ဖွင့်လာမယ့် အနေအထားမှာ ၊ သရေတစ်ပေါက်ဘဲ လိုတယ်ဆိုပြီး ချဲဆီးဘက်ကို အားပေးမယ့်လူများမှာ အသေအချာပါဘဲ ။
မောင်ပေ့အနေနဲ့ ခန့် မှန်းရမယ်ဆိုရင် ၊ မိနစ်၉၀အတွင်း “““ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ””” တစ်ဂိုးအသာ နဲ့ သေချာပေါက် နိုင်ဖို့ ၆၀% ရှိနေပါတယ် ။ ချဲဆီးနောက်တန်းသာ ဘိုင်ယန်ရဲ့ ရစ်ဘာရီ နဲ့ ရော်ဘင် တို့ ကို မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ၂ဂိုးလောက်အထိ သွင်းခံရနိုင်ပါတယ် ။
“““ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ””” ပါဘဲ ။
ဂျူဗင်တပ် – နာပိုလီ
ဂျူဗင်တပ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင် ၊ နိုင်
ဂျူဗင်တပ် ၃-၁ အက်တလန်တာ
ကယ်ဂလီယာရီ ၀-၂ ဂျူဗင်တပ်
ဂျူဗင်တပ် ၁-၁ လက်ချီ
နိုဗာရာ ၀-၄ ဂျူဗင်တပ်
စီဆီနာ ၀-၁ ဂျူဗင်တပ်
နာပိုလီ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ ငါးပွဲမှာ
နိုင် ၊ ရှုံး ၊ နိုင် ၊ သရေ ၊ နိုင်
နာပိုလီ ၂-၁ ဆီနာ
ဘိုလော့နာ ၂-၀ နာပိုလီ
နာပိုလီ ၂-၀ ပါလာမို
ရိုးမား ၂-၂ နာပိုလီ
လက်ချီ ၀-၂ နာပိုလီ
ဂျူဗင်တပ် နဲ့ နာပိုလီ တို့ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများမှာ
1.4.2012 ဂျူဗင်တပ် ၃-၀ နာပိုလီ
29.11.2011 နာပိုလီ ၃-၃ ဂျူဗင်တပ်
22.5.2011 ဂျူဗင်တပ် ၂-၂ နာပိုလီ
9.1.2011 နာပိုလီ ၃-၀ ဂျူဗင်တပ်
25.3.2010 နာပိုလီ ၃-၁ ဂျူဗင်တပ်
စနေနေ့ မနက်ပိုင်း ဈေးအနေအထားအရ ဂျူဗင်တပ် ဟာ သရေဆိုရင် အပြည့်ဆုံးရှုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ဂိုးဈေးကတော့ သုံးဂိုးဆိုရင် ၅၀ အနိုင် အနေအထားဖြစ်ပါတယ် ။
၂၀၁၁-၁၂ စီးရီးအေ ချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ် နဲ့ ၊ လာမယ့်ရာသီမှာ ယူရိုပါလိဂ်ဘဲဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ နာပိုလီ တို့ တွေ့ ဆုံမှု မှာ ဂျူဗင်တပ် က သရေ ရှုံးအနေအထားဘဲ ဆိုတာ ဈေးကနုလွန်းပါတယ် ။
တစ်ကယ်လို့ သည်ဘက်ဈေးမှာ ဂျူဗင်တပ် က တစ်ဂိုးအနိုင် ၉၀/၉၅/၈၀ ဘဲ ဖွင့်လာရင်တော့ ဂျူဗင်တပ် အနိုင်ဆိုတာ သေချာပါတယ် ။
တစ်ကယ်လို့ သည်ဘက်ဈေးမှာ ဂျူဗင်တပ် သရေ ၉၀/၉၅/၈၀ အရှုံး ဘဲ ဖွင့်လာရင်တော့ မိနစ်၉၀အတွင်း သရေကျဖို့ ရာနှုန်း၉၀ ရှိပါတယ် ။
ဂိုးအနဲအများ ကို ရွေးခြယ်မယ် ဆိုရင်တော့ ““ ဂိုးအများ ”” ဟာ အောင်မြင်ဖို့ ၈၀% ရှိနေပါတယ်။
အသေးစိတ်အနေအထားများကို ကွန်မင့်ဖြင့် ဆက်လက်ရေးတင်ပါမည် ။
မနေ့က PSP ဂိမ်းထဲမှာတော့ ချက်ကြီးနိုင်သွားတယ်
ဥုံ ကွိစိကွစ… ကိုပေ ခန့်မှန်းသလို ဖြစ်ပါစေ… အရဲစွန့်ရတော့မှာ…
သေချာတာကတော့ တသင်းသင်းတော့ အနိုင်ရမှာ သေချာမယ်ထင်တာပဲ…
အူးပေပြောတဲ့အတိုင်း မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကို အောပလိုက်မယ် .အောပလိုက်မယ်.အောဘလိုက်မယ်..
အနဲဆုံး ဘီအီးတော့ တိုက်မယ်မဟုတ်လား ကျောက်သထေး ဘောအူးပေ ခင်ဗျ
၀က်စ်ဟမ်းနဲ. ဘလက်ပူးပွဲ ကို ဘာလို.ချန်ခဲ.တာလဲ ။အဲဒါကိုစောင်.နေတာ….
ဖုန်းနံပါတ်သိရင် ချက်ချင်းတောင်ဆက်လိုက်ချင်သေး …။
အောလိုက်ပြီ ။ လက်ပကျွတ်လေးများရမလားလို. …………..။
ကွန်မကောင်းလို့ ၊ အခုမှ ဝင်ရသဗျား ။
ဝက်ဟမ်းပွဲကလဲ ဈေးမှားနေတယ်ဗျ ။ သရေအရှုံး ကို ဝက်ဟမ်း တစ်ဂိုးအနိုင် ၉၀ ဆိုတော့ ၊ ဝက်ဟမ်း အောင်ဖို့ 90%ကျော် ရှိပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် ပွဲကတော့ ရှင်းပါတယ် ။ ချဲဆီးခေါ်ထားတာ သိသာလွန်းတယ် ။ ဘိုင်ယန် အိမ်ကွင်းမှာ ကစားရမှာဖြစ်လို့ ၊ ဘိုင်ယန် တစ်ဂိုးထဲနဲ့ ကပ်နိုင်မလား ၊ အပြည့်အဝ နိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရုံပါဘဲ ။
ချယ်လ်ဆီးဂို သိပ်အားမရဘာ.. ဘေယန်မြူးနစ်အသင်း နိုင်ပါလိမ့်မည်..။
အူးလေးနဲ့ဆန့် ကျင်ဘက် လုပ်လိုက်လို့ 
ဖတ်ရှုအားပေးသွားကြသော ချစ်မိတ်ဆွေစာဖတ်သူများနဲ့ ကွန်မင့်များဖြင့် ခန့် မှန်းချက်ပေးကြသော ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဘိုင်ယန်ပွဲ နဲနဲလေးလွဲသွားပါသဖြင့် ဒဂနေ့ ဂျုဗီပွဲ နှင့် အသက်ဆက်ပါဦးမည်…
ကိုGipsy နောက်ကို လိုက်စမ်းပါ အူးဗိုက်ရာ ။
ဒီညမှာ ဒုတိယမြောက် ဖလား ကို သိမ်းပိုက်မယ့်
မအူပင်ကလပ် ““ ဂျူဗင်တပ် ””